जुनकिरीले उज्यालो देला तर, सडक सौर्यबत्ती बलेन ! ::Nepali TV
You are here : Home News जुनकिरीले उज्यालो देला तर, सडक सौर्यबत्ती बलेन !
बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्गलाई रातिमा उज्यालो र सुन्दरता राख्ने उद्देश्यले सडकबीच भागमा राखिएका सडक सौर्यबत्तीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।
सडककोबीच भागमा राखिएका सडक सौर्यबत्तीको उज्यालो जुनकिरीझैँ मधूरो टल्किने उज्यालो मात्र दिन्छन् । बुटवल बेलहिया सडक खण्डको बाटो फराकिलो बनाउने र सडकमा रातिमा उज्यालो बनाएर सुन्दरता राख्ने उद्देश्यका साथ राखिएका सडक सौर्यबत्ती प्राविधिक रुपमा दुई वर्ष नपुग्दै काम नलाग्ने अवस्थामा छन् ।
बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि भैरहवाको नेपाल भारत सीमा बेलहियासम्मको सिद्धार्थ राजमार्गलाई सरकारले व्यापारिक मार्गको रुपमा आधुनिक र फाराकिलो बनाउने काम भइरहेको छ । उक्त सडकबीचमा रहेको डिभाइडरमा पोल गाडेर राखिएका सौर्यबत्ती अहिलेसम्म साढे पाँच किलोमिटरमा राखिएको छ । सडककोबीच भागमा राखिएका यस्ता एक सय ५० सौर्यबत्ती प्राविधिक रुपले नै काम नलाग्ने अवस्थामा देखिएका छन् ।
व्यापारिक मार्गको बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि तिलोत्तमा नगरपालिकाको ड्राइभरटोलसम्मको झण्डै साढे ४ किलोमिटर खण्डमा र भैरहवामा एक किलोमिटर क्षेत्रमा एक सय ५० बत्ती राखिएको छ । व्यापारिक मार्ग आयोजनाको करीब दुई करोड रूपैयाँको लागतमा करीब दुई वर्षअघि मात्र यी बत्ती राखिएका हुन् । महेश निर्माण सेवा कम्पनीले उक्त सोलारबत्ती जडानबापतको दुई करोड रूपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले सडकमा रातिको समयमा पनि उज्यालो राखेर सुन्दरता राख्ने उद्देश्यका साथ राखिएको सोलार बत्तीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेकाले यसको विकल्पमा अन्य व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले आयोजनाले राजमार्ग क्षेत्रमा राख्ने यस्ता बत्ती पूर्णरुपले उज्यालो दिने खालको राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको नगरप्रमुख घिमिरे बताए ।